मोटोपन घटाउन के गर्न सकिन्छ ?
डा. अरूणा उप्रेती काठमाडौं,२४ साउन
‘तपाईं पोषणकै बारेमा कति लेखिरहनुहुन्छ ? तपाईंले लेखेका कुरा पढ्दा मलाई पनि कण्ठै भइसक्यो । अब कुनै नयाँ विषयमा लेख्नुस् न,’ एक पाठकले केही दिनअघि मलाई भनेका थिए, ‘हजुरआमाको भान्छा, मेरो विश्वविद्यालय’ नामक लेख शिलापत्रडटकममार्फत सार्वजनिक भएपछि ।
मैले उनलाई जवाफ दिएँ, ‘म लेखिरहन्छु, यही विषयमा । किनभने भोजन बढी भएर वा पोषण नपुगेर बालबालिकादेखि वयस्क र वृद्धसम्म अनेक समस्याबाट पीडित भएका छन् । एकातिर कुपोषण छ, अर्कोतिर जंक फुड खाएर मानिसमा मोटोपन बढेको छ । त्यही मोटोपनले उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या, ढाड र घुँडा दुख्ने समस्या निम्त्याएको छ ।
साधारण मानिसको औकातले अस्पतालमा लाग्ने खर्च धान्दैन । यसकारण, परिवारको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुन्छ । विभिन्न पत्रिकामा छापिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी लेख पढ्नोस् त कसरी कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढेको छ त्यसैले मैले जति लेखे पनि हुन्छ । अझ विदेशमा त ‘पोषण’सम्बन्धी पत्रिकाहरू नै निस्कन्छन् । पोषणबारे अनेक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिन्छ । हामीकहाँ त्यसरी पत्रिका ननिस्के पनि अहिले मानिसलाई भोजन र पोषणप्रति निकै चासो छ । यो स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिएको हुनाले मानिसलाई जानकारी दिन लेखिरहन्छु नै ।’
मेरो यो लामो स्पष्टीकरण पति उनी अवाक् भए होलान् । तर, मलाई पोषणबारे लेख्नु भनेर प्रेरणा दिइरहने पाठकहरू पनि धेरै छन् । ‘तपाईंले लेखेको लेख पढेपछि मैले छोरीलाई घरमै बनाएको सातु खुवाउन थालेको छु । मैले कोल्ड ड्रिंक त खान छोडें, मेरो तौल पनि घट्यो । मैले आलस र तिल खान थालें । म घाममा पनि हरेक दिन बस्छु । जीउ दुख्ने र घुँडा दुख्न एकदम कम भयो,’ एक पाठकले प्रतिक्रिया दिएका थिए । योे प्रतिक्रियाले म झन् ऊर्जा थपिदियो ।
कर्णालीको भाते संस्कृतिबारे धेरै लेख लेखेकी थिएँ । कर्णालीका बालबालिका कुपोषित हुनुको प्रमुख कारण भाते संस्कृति र सरसफाइको कमी हो भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएकी थिएँ । यसकारण, कर्णालीमा कामका लागि चामल बाँड्ने विश्व खाद्य संघका कति साथीहरू मसँग रिसाए पनि तर जब डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको ‘कर्णालीमा मुखभरि होइन, भातमरी छ’ भन्ने शब्दहरू पढें तब ममा साहस आयो, झन् लेख्न । आत्मविश्वास जाग्यो, स्थानीय अन्नलाई प्रवर्धन गर्न ।
त्यसरी बारम्बार लेखिएका लेखको बिस्तारै प्रत्यक्ष प्रभाव त मैले आफैं पनि महसुस गर्न थालेकी छु । मेरा साथीले पहिले–पहिले घरमा बोलाउँदा चिप्स, चाउचाउ र कोल्ड ड्रिंकहरू त जानेबित्तिकै दिन्थे ।
‘अरूणाले भनेर नहुने रहेछ, के गर्ने, पाहुनालाई नभई नहुने’ भन्ने मेरा साथीले केही दिनअघिको भोजमा ‘कोल्ड ड्रिंक’ दिएनन् । कागती, पुदिना र बिरे नुन हालेर सर्बत बनाएर खुवाए । घरमै बनाइएको फलफूलको रस खुवाए । तामाको रस, मार्सी भात, सिमीको रस, टिमुर र गोलभेंडाको अचार खुवाए । ती साथी हुन् मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी । उनले भने, ‘आज त अरुणाको लेख पढेर र खाना खुवाएजस्तै भयो ।’ म नि दंग परें, मेरा साथीमा समेत यति प्रभाव परेछ । वास्तवमै मेरो लेखनीले केही न केही काम त गरेछ । कोल्ड ड्रिंक त आजकल विवाह भोजमा पनि कम प्रयोग हुन थालेजस्तो लाग्छ ।
एक दिन ४८ वर्षीया कमला कार्कीले सोधिन्, ‘मोटोपन घटाउन के गर्न सकिन्छ ?’
उनी मसँग सल्लाह लिन आएकी थिइन् २० वर्षअघि । मैले उनलाई कोदो र फापरको खोले (सुप) बनाएर खाए राम्रो हुन्छ भन्ने सिकाउन खोजें । बटुकोमा कोदो र फापरको सुप हालें र माथिबाट मरिच छर्कें । र, उनलाई खान आग्रह गरेर भनें, ‘म यो सुप खान्छु अनि बिहानको भात नै खानुपर्दैन । लामो समयसम्म भोक पनि लाग्दैन ।’
मेरो कुरा सुनेपछि सुपमा हेरेर उनले दिगमिग गर्दै भनिन् ‘दिदी, यस्तो कोदो र फापरको सुप त मेरो घरमा त कुकुरले पो खान्छ ।’
उनको कुराले मेरो मन भरंग भयो । उनलाई स्वास्थ्य राम्रो पार्न मोटोपना घटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर अरू सल्लाह दिने जाँगर नै हरायो । २० वर्षअघि मोटोपनको कारणले घुँडा दुखेर मसँग सल्लाह लिन आएकी कमलालाई अहिले त मोटोपनको कारणले दुई पाइला भ¥याङ चढ्न गाह्रो हुन्छ । अब उनी घुँडाको शल्यक्रिया गर्ने सुरसारमा छिन् । उनलाई देख्दा दुःख त लाग्छ र म मनमनै भन्छु, ‘कमला, सायद तिम्रो घरको कुकुरको तिम्रोभन्दा स्वास्थ्य राम्रो छ, होला । सायद, तिमीले १५ वर्षअघि नै कोदो र फापरको सुप र हरियो तरकारी खान सुरु गरेको भए तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो ।’
कमलाजस्तै कति धेरै महिलाहरू होलान्, जो कोदो र फापरको सुप खान दिगमिगाउँछन् । र जीवनभर मोटोपन र (त्यसले गर्दा हुने कुपोषण) त्यसको असरबाट हुने अनेक समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिनुमा हाम्रो हात हुँदैन तर कतिपय स्वास्थ्य समस्याचाहिँ हाम्रै बानी, व्यवहार, भोजन र जीवनशैलीका कारण निम्तिएका हुन्छन् । हाम्रो खानपानमा आएको परिवर्तनले साना बालबालिकादेखि वयस्कसम्म समस्यामा छन् । म भान्छामा गएर सायद स्वादिष्ट खाना त बनाउन सक्दिनँ तर खान हुने स्वस्थकर खानाचाहिँ बनाउन सक्छु । प्रत्येक आमाबुबालाई मैले भन्ने गरेकी छु, ‘तपाईंलेआफ्नो सन्तानलाई स्वस्थकर खाना खाने बानी लगाइदिनुभयो । स्वस्थकर खाना कसरी बनाउने भनेर व्यावहारिक रुपमा सिकाइदिनुभयो भने यो उनीहरूका लागि एक ठूलो शिक्षा र सम्पत्ति हुनेछ ।’
तपाईंका बालबालिका देश विदेश जहाँ गए पनि आफैं स्वस्थकर खाना खवाउन सक्नेछन् । यसकारण, उनीहरूको पैसा बचत हुन्छ र शरीर स्वस्थ हुन्छ । उनीहरू काम गर्न सक्छन् ।
कति आमाबुबाले ‘हामी त छोराछोरीलाई भान्छाको काम लगाउँदैनौं, उनीहरूलाई त चिया पनि राम्रोसँग पकाउन आउँदैन’ भनेर बडो गर्वपूर्वक सुनाउँछन् । यो त गर्व गर्ने विषय होइन, लज्जाको कुरा हो । बाल्यकालदेखि नै भान्छामा सहभागी हुन सन्तानलाई प्रेरणा दिइरहनुपर्छ । खाना बनाउनु एउटा कला हो, पाँचतारे होटेलको जस्तो बनाउन सबैले सक्दैनन् र जरुरत पनि छैन । तर, साधारण खाना बनाउन जान्नु निकै राम्रो हो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू आफूसँगै चाउचाउ लिएर जान्छन् । दिनभर काम गरेर कोठा फर्किएपछि चाउचाउ उमालेर खान्छन् । अनि, अस्वस्थ हुन्छन् ।
यस्ता विभिन्न कारणले मानिस अस्वस्थ भएकाले पोषणबारे लेख्न जरुरी भएको हो । अहिले कति अभिभावक स्वास्थ्यप्रति सचेत छन् । ‘तपाईंले पोषणहीन खाना दिँदा उनीहरूलाई विषालु माया दिएजस्तै लाग्छ । बालबालिकाले रोएर माग्यो भने तपार्इं चुरोट र रक्सी त दिनुहुन्न नि । जंक फुड पनि त्यस्तै हो, लागूपदार्थ जस्तो ।
मेरा एक मित्रकी छोरी १६ वर्षकी भइन् । उनको तौल झन्डै सय केजी छ ।
पहिले माया गरेर छोरीले मागेजस्तो बजारीया र महँगो खाना दिँदा दिँदा छोरीले घरको खाना नै खान छोडेकी हुन् । चाउचाउ, कोकाकोला र फ्यान्टा उनको खाना हुन्थ्यो । खाजा पनि बिस्कुट र कुरमुरे आदि हुन्थे । उनमा यस्तो कुराको लत बस्दै गयो । र, उनको तौल अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गयो । अहिले उनी अनेक समस्याबाट पीडित छिन् । त्यस्तै आमाबुबा पनि जंक फुडको लत छुटाउन लागिपरेका छन् तर असफल छन् ।
यस्ता त धेरै घटना छन् । यो लेखले पाठकलाई पोषणबारे जानकारी दिई स्वस्थ हुन प्रेरित गर्छ त्यसैले म स्वस्थ खाना खानुको महत्त्वबारे लेखिरहन्छु ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, १०:१४:००
मोटोपन र मधुमेह : चेत खुले बेस
भोजन, सौन्दर्य प्रशाधन र सुन्दरता